WARBIXIN: Xulalka Bandhiga Ugu Fiican Sameeyay, Ciyaartoyda Xogta Ugu Fiican Loo Diwaan Galiyay Iyo FIFA Oo Soo Bandhigtay Wax Qabadka Koobka Aduunka Ee Russia 2018. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Xulalka Bandhiga Ugu Fiican Sameeyay, Ciyaartoyda Xogta Ugu Fiican Loo Diwaan Galiyay Iyo FIFA Oo Soo Bandhigtay Wax Qabadka Koobka Aduunka Ee Russia 2018.
July 4, 2018 Mahamoud Batalaale
Waxaa la soo gaba gabeeyay wareegii 16ka xul qaran ee koobka aduunka waxaana hadda isku soo hadhay siddeed xul qaran oo afar kulan ugu soo kala bixi doona afar dhamaadka koobka aduunka iyada oo siddeed xul qaran oo kale lagu reebay wareegii laga soo gudbay ee 16ka. Kulankii England iyo Colombia ay rekoodhayaasha ugu kala baxeen ayaa ahaa kulankii ugu danbeeyay wareegii 16ka koobka aduunka.
Xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa tan iyo maalintii ugu horaysay ee kubbadii ugu horaysay laysku taabtay waxay diwaan galinayeen wax walba oo muhiim ah oo koobka aduunka la xidhiidha waxayna daabaceen xogta iyo istatikada koobka aduunka ee Russia 2018.
Xogtan ayaa iskugu jirta mid heerka ciyaartoy ah iyo mid xulalka ah waana ciyaartoyda ama xulalka wax qabadka ugu fiican ka sameeyay koobka aduunka waxaa sidoo kale qayb ka ah xogta anshaha ciyaartoyda ee kaadhadhka digniinta ah iyo waliba casaanka la soo bixiyay.
Haddaba ka hor inta aanan idiin soo gudbin xogta ay FIFA ka ururisay koobka aduunka aan marka hore eegno qaabka loo wada ciyaari doono kulamada siddeed dhamaadka koobka aduunka iyo waliba taariikhda iyo waqtiga kulamadan la ciyaari doono.
Kulamo aad u xiiso badan ayaa ka jiri doona siddeed dhamaadka koobka aduunka waxaana ugu xiiso badan kulamada isku dhinaca ah ee Uruguay vs France iyo Brazil vs Belgium oo labadii xul ee ka soo baxaa markale afar dhamaadka isku arki doonaan.
Qaybta kale marti galiyaasha Russia oo si layaableh tartankan uga reebay xulka qaranka Spain ayaa kulan xiiso badan la yeelan doona Croatia oo ka mid ah xulalka layaabka sanadkan koobka aduunka ka samaynaya halka England oo riyo wayn ku jirtaa ay Sweden wada ciyaari doonaan.
Halkan Kaga Bogo Taariikhda iyo Waqtiga La Ciyaari Doono Kulamada Siddeed dhamaadka koobka aduunka:
Jimce, July 6 : Uruguay vs France, Nizhny Novgorod= 5:00 Galabnimo ee saacada Geeska Afrika
Jimce, July 6 : Brazil vs Belgium Kazan =9:00 Habeenimo ee saacada Geeska Afrika
Sabtida, July 7: Sweden vs England Samara=5:00 Galabnimo ee saacada Geeska Afrika
Sabtida, July 7 : Russia vs Croatia Sochi =9:00 Habeenimo ee saacada Geeska Afrika
Sidoo kale halkan Sawirka Ka Eeg Qaabkii Labada Qaybood Ee Koobka Aduunka Loogu Soo kala Baxay Iyo Sida Layskugu aadi karo ilaa finalka koobka aduunka:
Intaa kadib, shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo koobaysa xogta ugu muhiimsan ee ay FIFA ka ururisay koobka aduunka tan iyo maalintii ugu horaysay ee Russia iyo Saudi Araba lagu furay iyo xogta ugu muhiimsan ee ilaa hadda laga hayo. Halkan ayaanad xogta kaga bogan kartaa.
Aan ku bilawnee koobka aduunka ayaa intii uu socday laga soo dhaliyay 146 gool waxaana la bixiyay 189 kaadh oo digniin ah halka 4 kaadh casaan la bixiyay kulamadii koobka aduunka ee min bilawgii ilaa kulankii ugu danbeeyay ee wareega 16ka xul qaran ee koobka aduunka.
Guud ahaan kulamadii koobka aduunka la soo ciyaaray ee min kulankii furitaanka ilaa kulamadii wareega 16ka xul qaran ee koobka aduunka waxay ciyaartoydu dhamaystireen 43,139 kun oo baas. Dhinaca kale koobka aduunka ayaa celcelis ahaan kulankiiba laga soo dhaliyay 2.6 gool taas oo muujinaysa heer gool dhalin waali ah ku ah koobka aduunka.
Sidoo kale celcelis ahaan kulankiiba waxay garsoorku bixiyeen 3.4 kaadh oo digniin ah laakiin celcelis ahaanta kaadhadhka digniinta ah ayaa aad u hooseeya iyada oo kulankiiba la bixiyay 0.07 kaad cas ah, waana afar kaadh casaan oo guud ahaan la soo bixiyay.
Guud ahaan kulamadii la soo ciyaaray koobka aduunka waxay xulalkii ka qayb galay celcelis ahaan kulankiiba dhamaystireen 770.3 baas iyada oo xulka Spain uu in ka badan 1000 baas uu dhamaystiray kulankii Russia waana rekoodh iyaga khaas u ah.
Xulka qaranka Belgium ayaa ilaa hadda ah xulka ugu gool dhalinta badan koobka aduunka waxayna soo dhaliyeen 12 gool halka xulka qaranka Spain uu yahay xulka guud ahaan kubbad bixinta ugu badan dhamaystiray waxayna koobka aduunka ka soo dhamaystireen 3120 kun oo baas.
Marti galiyaasha koobka aduunka ee Russia ayaa haysta difaacii ugu fiicnaa ee halista ugu badan iska saaray waxayna difaacyada Russia sameeyeen 196 kubbad iska saariseed waana rekoodh koobka aduunka ee ay marti galiyaan ay ku hogaaminayaan.
Haddii aan dhinaca ciyaartoyda u soo laabano Harry Kane ayaa gool dhalinta iyo tartanka kabta dahabka ah ee koobka aduunka ku hogaaminaya 6 gool wuxuuna hadda ugu cad cad yahay in uu kabtan ku guulaysan karo waxaana kaalinta labaad ku jira Romelu Lukaku oo haysta 4 gool halka Ronaldo oo tartankan ka hadhay uu kaalinta saddexaad ugu jiro isla 4 gool balse gool dhalinta uu Lukaku ku danbeeyay iyo in Ronaldo uu hadhay ayaa kaalmahan go’aamisay.
Neymar Jr ayaa isna hogaaminaya isku dayga goolka ee uu ciyaartoy inta ugu badan sameeyay wuxuuna xidiga ree Brazil goolka bartilmaameedsaday 14 jeer halka Christian Eriksen oo ka tirsan xulka qaranka Denmark oo la reebay uu hogaaminayo masaafada ama fogaanta ugu badan ee uu ciyaartoy ku orday koobka aduunka wuxuuna gooyay fogaan dhan 51 kilomitir.
Kabtanka xulka qaranka Spain ee Sergio Ramos ayaa dhamaystiray kubbad bixintii ugu badnayd ee koobka aduunka isaga oo Ramos intii uu tartankan ku jiray dhamaystiray 485 baas waana rekoodh wali isaga ugu xidhan Russia 2018.
Goolhayaha xulka qaranka Mexico ee Ochoa ayaa noqday goolhayaha badbaadinta ugu badan ka sameeyay koobka aduunka ee Russia 2018 wuxuuna sameeyay 25 gool badbaadineed mana jiro goolhaye kale oo rekoodhan gaadhay sanadkan.
Kulankii Belgium iyo Tunisia ayaa noqday kulanka goolasha ugu badan layskaga dhaliyay iyada oo 7 gool ay Red Devils iyo Tunisa iska dhaliyeen heerkii groupyada sidoo kale isla kulankii Belgium iyo Tunisia ayaa laga sameeyay isku dayga ugu badan oo 31 isku day goolka ah.
Kulankii Spai iyo Russia ee wareega 16ka xul ee koobka duunka ayaa isna noqday kulankii baaska ugu badan la dhamaystiray iyaga oo wadar ahaan Spain iyo Russia dhamaystireen 1235 kun oo baas laakiin 1029 ka mid ah waxaa dhamaystiray xulka qaranka Spain.
Guud ahaan intii uu koobka aduunku socday waxaa celcelis ahaan kulankiiba la dhamaystiray 770.3 baas iyada oo xulka Spain uu ahaa kan ugu kubbad bixinta badnaa. Xogta aanu halkan idiinku soo gudbinay waxay FIFA ka ururisay 56 kulan oo ka mid ah 64 ka kulan ee koobka aduunku ka kooban yahay.
Haddaba akhriste, afartee xul ayaad filaysaa in ay ka soo bixi doonaan siddeed dhamaadka koobka aduunka? Balse sidoo kale ayaad filaysaa in ay yihiin xulalka hadda ugu cad cad ee koobkan ku guulaysan doona? Fikirkaaga waxaad noogu reebi kartaa qaybta hoose ee commentska sidoo kale halkan hoose kula share-garee asxaabta kale.
Wuxuu dhaliyey 7 Goal
Waxaad malaha ilowdeen penelty kick
Ugu danbeyey ama rikoodhihii labaad ee uu dhilyey
So far he’s top scorer he’s leading 7 goals
No one getting closer
Thank you for the updating latest
2 tunisia ayuu dhaliyay
1 waa kii xaleyy colombia
goolka todobaad noo sharax adaa sheegtay in uu dhaliyay
Baac cayaaraha wax ka baro benaltiga dheeriga lama xisaabiyo
waryaa Sidaan Maad cyr kudaawataa halkee Ku aragtey cyr penalty gaartey oo golasha penalty ga laxisaawaayo
dib ugu laawo tariiqda
Khalid garas says:
Barazil vs belguim
Brazil vs Belgium kii Soo Baxa Waxaa uu ku aadaa
France vs Uruguay Kii Soo Baxa
Sweden vs England kii soo Baxa waxaa uu ku aadaa
Croatia vs Russia kii soobaxa
Semi Final ka waa
Final ka waa Brazil Vs England
Brazil ayaa badineesa 3-2
expert xabiib says:
Belguim vs france
final: Belguim v Crotia
Horta Saan Jeclaan lahaa waa Semefinal Belguim Vs France
Belguim vs England
And Belguim Win
Balse Saadaal Sports hadaan Saadaaliyo Waxay Ila Tahay Semfinal
England vs Brazil and Brazil Will win
Crotia vs Brazil
Brazil are the winners of the world cup